ABE-TS SPORTING FC BANIKELE NGEZICATHULO NAMAQAKELO – Sivubela intuthuko Newspaper
I-TS Sporting yase Mpumalanga inikele ngezicathulo zesikole Kanye namaqakelo esikoleni esigqame kakhulu ebholeni lika nobhutshuzwayo Umqhele High School esise ndaweni yase Clermont.
Iqembu elaziwa nge-TS Sporting lase Zwelisha eMpumalanga livakashele Umqhele High School okuyisikole sase Clermont esigqame kakhulu ebholeni lezinyawo banikela ngezicathulo zesikole kanye namaqakelo baphinde bashiya abafundi neziluleko.
I-TS Sporting ikhethe ukubungaza ukungena kuma-Quarter Finals eNedbank Cup ngokuyonikela kubafundi njengendlela yokubonga emphakathini ngokuyeseka. Banxuse ukuba intsha iqhubeke nokuba yingxenye kwezemidlalo nokuzimisela ezifundweni ikakhulukazi labo abenza ibanga lika matikuletsheni.
“Abafundi mabangakhohlwa ukuthi baphuma emakhaya anjani uma sebengaphakathi kwamagceke esikole benze okuphambene nemfundiso abayithole kubazali babo,” usho kanje uMnuz Mcdonald Makhubedu ongumqeqeshi waleli qembu.
Ukhuthaze abafundi ukuba noma iningi inkohlakalo ebholeni lezinyawo kodwa mabangayeki ukudlala ibhola noma eminye imidlalo nokuba yingxenye yemiqhudelwano esuke yenzelwe emiphakathini ngoba angeke bazi ukuthi obani ababukele ngesikhathi bedlala.
Uphinde washo nokuthi noma sebefike emanyuvesi baqhubeke nokuba yingxenye yezemidlalo baphinde badlale ngokukhulu ukuzimisela, bahloniphe nabaqeqeshi babo ukuze bazakhele igama elihle yonke indawo abafika kuyona.
Uphethe ngokuthi, kuhle ukuthi abafundi bazi ukuthi isimo sase makhaya abo singashintshwa yibona inqobo nje uma bezazi ukuthi bafunani. Uthe mabasebenzise konke okulethwe eduze kwabo okungabasiza wabe esebala imfundo yamahhala emanyuvesi njengento yokuqala okumele baqinisekise ukuthi bayisebenzisa ngendlela efanele.